प्रभु येशू – Nepali Website
येशूले मत्ती १६ः१३ मा आफ्ना चेलाहरूलाई सोध्नु भयो, “मानिसहरूले मानिसको पुत्रलाई को हो भनी भन्छन्?” उहाँका चेलाहरूले जवाफ दिए, “कसैले बप्तिस्मादिने यूहन्ना, कसैले एलिया, र कसैले यर्मिया वा अगमवक्ताहरूमध्ये कुनै एक जना हुन् भनी भन्छन् ।” यहाँ विचार गर्ने कुरा के छ भने, मानिसहरूले येशू दुष्ट हो भनि भन्दैन थिए । वास्तवमा, उनीहरू सबैले येशू को हो भन्ने विषयमा के विचार गरे—बप्तिस्मादिने यूहन्न, एलिया, यर्मिया, अगमवक्ताहरूमध्ये एक जना—उहाँहरू परमेश्वरका सबै सच्चा अगमवक्ताहरू थिए । प्रभु येशूलाई यो प्रश्न सोध्ने बेलामा जुन यथार्थ थियो त्यही अहिले पनि छ । पृथ्वीमा जस्तो कहिल्यै विद्यमान नभएको सरहको कुनै व्यक्ति, जसको विषयमा हामीलाई कुनै विचार गर्ने कुनै आवश्यकता छैन, त्यस्तै तरिकामा प्रभु येशूलाई खारेज गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा सबैका सामु छर्लङ्ग छ । न त हामीले उहाँलाई इतिहासका पृष्ठहरूबाट निकाल्न सक्छौँ, न पूरा संसारमाथि उहाँको जीवन र शिक्षाको प्रभावलाई नै हटाउन सक्छौँ । यही कारणहरूले गर्दा, येशू को हुनुहुन्थ्यो भन्ने प्रश्न बारे स्वयं उत्तर दिनका लागि हामी व्यक्तिगत रूपमा बाध्य छौँ । दसौँ लाख मानिसहरूले भन्छन्, येशू राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो र उनीहरूले उहाँलाई परमेश्वरका अगमवक्ताका रूपमा स्वीकार्छन् । यदि जनसाधारणको विश्वास अनुसार नै उहाँ राम्रो मान्छे र परमेश्वरको अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो भने, उहाँले आफ्नो विषयमा जे भन्नु भयो, त्यसलाई हामीले सत्यको रूपमा स्वीकार्नु पर्छ । यसै आधारमा हामी “के येशू परमेश्वर हुनुहुन्छ?” भन्ने प्रश्नमा विचार गर्ने छौँ ।
संसारको सृष्टि हुनभन्दा पूर्व येशू पिताका साथ महिमित हुनुहुन्थ्यो
प्रभु येशूले भन्नु भयो संसारको सृष्टि हुनुभन्दा पूर्व उहाँ पिताका साथ महिमित हुनुहुन्थ्यो । “अब हे पिता, संसारको सृष्टि हुन अघि तपाईँको सम्मुख मेरो जुन महिमा थियो, त्यसैले आफ्नो उपस्थितिमा मलाई महिमित पार्नुहोस् ।” यूहन्ना १७ः५ । येशू को हुनुहुन्छ बारे हाम्रो विश्वास जे भएपनि, उहाँको जीवनको इतिहास अनुसार उहाँको जन्म बेथलेहेममा भयो, जुन कुरा हामी मत्ती २ः१—६ र लूका २ः१—७ मा पढ्छौँ । पूर्वका ज्योतिषीहरू (अहो, कस्ता उत्तम ज्योतिषी !) यरूशलेममा आइपुगे किनभने उनीहरूले आकाशमा उहाँको तारा देखे जो यहूदीहरूका शासक हुने थिए । हेरोद राजाले मुख्य पुजारी र जनताका शास्त्रीहरूलाई सोध्दा सबैका लागि यो कुरा स्पष्ट भयो, भविष्यवाणी अनुसार यहूदीहरूका शासक बेथलेहेममा जन्मने थिए । “तर ए बेथलेहेम एप्राता, तँ यहूदाका कुलहरूमध्ये सानो भए तापनि तँबाट मेरो निम्ति एक जना निस्कनु हुने छ, जो इस्राएलका शासक हुनुहुने छ, जसको शुरू पुरानो समयदेखि, अर्थात् प्राचीनकालदेखि नै छ ।” मीका ५ः२ । मीकाले जस राजाको कुरा गरे उहाँलाई ७०० वर्षभन्दा अधिक समय पछि ज्योतिषीहरूले खोजे र हेरोद राजाले उहाँका विषयमा सोधपुछ ग¥यो । जब ज्योतिषीहरू बेथलेहेममा आइपुगे, जुन तारालाई उनीहरू पछाउँदै थिए, त्यो तारा बालक येशूका साथ युवती मरियम भएको ठाउँमा अडियो । उहाँ त्यही येशू हुनुहुन्थ्यो जसले संसारको सृष्टि हुनभन्दा पूर्व, उहाँ पिताका साथ महिमित हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा व्यक्त गर्नु भयो, अनि भविष्यवाणीले पनि त्यही भन्छ । “उहाँका आगमनहरू प्राचीन समयबाट चलि रहेका छन्, अनन्तबाट पनि“ (अनन्त समय—स्ट्राङ्गको युनानी बाइबल जीआर ः ३११७, ५७६९) । ज्योतिषीहरू त्यति सन्तुष्ट भए कि उनीहरू आनन्दित भए, येशूलाई बहुमूल्य उपहार दिए र त्यस पछि घर फर्किए—तब उनीहरूले शासकको खोज समाप्त गरे ।
अब्राहाम हुनभन्दा पूर्व येशू “म छँदैछु” हुनुहुन्थ्यो
येशूले परमेश्वरको नाम “म छँदैछु” आफ्नो सन्दर्भमा व्यक्त गर्नु भयो । “येशूले तिनीहरूलाई भन्नु भयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, अब्राहाम हुनुभन्दा अघिबाटै म छँदैछु ।” यूहन्ना ८ः५८ । अब्राहामको मृत्यु उपरान्त हजारौँ वर्ष पछि, येशूले घोषणा गर्नु भयो, अब्राहामका जन्मभन्दा पूर्व, येशू स्वयं अविनाशी अस्तित्वमा हुनुहुन्थ्यो । येशूको सृजना भएको सन्दर्भमा यहाँ कुनै निहितार्थ छैन । उहाँले स्पष्ट भाषामा मात्र यो सरल कुरा भन्नु हुन्छ, “म छँदैछु” । यो भाषा पुरानो करारमा उपयोग भएको भाषा नै हो, “तब परमेश्वरले मोशालाई भन्नु भयो, म हुँ जो म हुँ…इस्राएलीहरूलाई तैँले यसो भन्नु, म हुँ भन्नेले तिमीहरूकहाँ मलाई पठाउनु भएको हो ।” यसै प्रकार मोशाले
कसका साथ कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो? “…अब्राहाम, इसहाक र याकूबका परमेश्वरसँग…” उहाँसँग जो सदैव विद्यमान हुनुहुन्छ (हिब्रु बाइवल ः १९६१; युनानी बाइबल जीआर ः १५१०) । बाइबलमा, परमेश्वरले आफ्नो विषयमा केवल यही शब्दहरू प्रयोग गर्नु भएका छन् । यही नाम येशूले स्वयंका लागि उपयोग गर्नु भयो, निसन्देह रूपमा भन्दै कि उहाँ एक सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ ।
येशू परमेश्वरका बराबर हुनुहुन्थ्यो
येशूले सिकाउनु भयो कि उहाँ परमेश्वरबाट बाहिर आउनु भयो (यूहन्ना १७ः८, यूहन्ना ८ः४२, यूहन्ना १६ः२७,२८, यूहन्ना ७ः२८) । येशू कहाँबाट आउनु भयो? उहाँको आफ्नै गवाही अनुसार उहाँ परमेश्वरबाट बाहिर आउनु भयो ! “प्रभु येशू… परमेश्वरको स्वरूपमा भएर पनि उहाँले परमेश्वरको बराबरी हुने कुरालाई एउटा पव्रिmराख्ने कुरा वस्तुजस्तो ठान्नु भएन ।” प्रभु येशू परमेश्वरको स्वरूपमा भएका कारण (युनानी बाइबल जीआर ः ३४४४ मार्फी ः स्वरूप; आकार; प्रकृति) । प्रभु येशू परमेश्वरको स्वरूपमा वा परमेश्वरकै सार र संरचना । उहाँ अनन्त कालदेखि परमेश्वर जस्तै विद्यमान हुन भएका कारण, उहाँले परमेश्वरसँग बराबर हुनमा कुनै गलती ठान्नु भएन । किन? किनकि उहाँ सधैँ विद्यमान एक र केवल एक परमेश्वरको पूर्ण प्रकृति, पूर्ण सार, र पूर्ण तत्व हुनुहुन्थ्यो । उहाँले परमेश्वरका साथ बराबर हुनमा परमेश्वरको चरित्रको अवैध अधिग्रहण ठान्नु भएन, यस कुरामा कुनै चमत्कार छैन । “तर आफैलाई रित्त्याईकन कमाराको रूप धारण गरेर, तथा मनुष्य भएर जन्मनु भयो (युनानी बाइबल जीआर ः ३४४४ मार्फी ः स्वरूप; आकार; प्रकृति) ।” जो आफ्नो पूर्ण सारमा परमेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँले मान्छेको पूर्ण सार धारण गर्नु भयो । आहा, भव्य रहस्य ! दिव्य मनुष्य ! अनन्त महिमाबाट बाहिर आएर परमेश्वर हाम्रा बीचमा बसोबास गर्न आउनु भयो । स्वयं परमेश्वर भए तापनि, आफैलाई रित्त्याए र एक मान्छेको रूपमा, “आफैलाई होच्याउनु भयो, र मृत्युसम्मै, अर्थात् व्रmूसमा मृत्युसम्मै आज्ञाकारी रहनु भयो ।” फिलिप्पी २ः८ ।
येशू अनन्त परमपिता हुनुहुन्छ
परमेश्वरलाई आफ्नो पिता र स्वयंलाई उहाँको पुत्रको रूपमा घोषणा गरेर येशूले आफ्नो दिव्य प्रकृति स्थापित गर्नु भयो (मर्कूस १४ः६१–६२; यूहन्ना १०ः२४–३८; ५ः१७–१८) । जसरी अहिले छ, त्यसरी नै तब धेरै मानिसहरूका लागि येशूको जन्म विशाल निन्दात्मक कुरा थियो । कैयौँ मानिसहरूका लागि उहाँको जन्मका परिस्थितिहरू अविश्वसनीय थिए र त्यसले कैयौँ मस्तिष्कहरूमा मरियम, येशूकी आमाको चरित्रमाथि प्रश्न उठाए । यस प्रकार अविश्वासीहरूबाट येशूले निकै दिक्दारी सहन गर्नु भयो । “… हामी व्यभिचारमा जन्मिएका होइनौँ ! हाम्रो पिता एउटै हुनुहुन्छ, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ ।” यूहन्ना ८ः४१ । यस कारण परमेश्वर मेरो पिता हो भनेर जब येशूले घोषणा गर्नु भयो, उहाँले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने उहाँकी आमा उहाँलाई जन्म दिने बेलामा कन्या हुनुहुन्थ्यो । (यशैया ७ः१४, मत्ती १ः२३) । “हेर, एउटी कन्याले गर्भ धारण गर्ने छे, र त्यसैले एउटा पुत्र जन्माउने छे, र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिने छ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग ।” यदि येशूकी आमा उहाँ जन्मिने बेलामा कन्या हुनुहुन्थ्यो, तब आवश्यक निष्कर्ष के छ भने येशू स्वयं त्यही पुत्र, इम्मानुएल हुनुहुन्छ, उहाँ हामीसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ । उहाँ हाम्रा निम्ति जन्मिएको बालक हुनुहुन्छ, हाम्रो निम्ति दिइएको छोरा हुनुहुन्छ । शासन उहाँका काँधमा हुनु, उहाँ अचम्मका हुनु, सल्लाहकार हुनु र शान्तिका राजकुमार हुनुका अतिरिक्त “शक्तिशाली परमेश्वर” र “अनन्त पिता” हुनुहुन्छ, जसलाई यशैयाले धेरै पहिला देखे र आफ्नो पुस्तकमा वर्णन गरे । यदि परमेश्वर उहाँका पिता हुनुहुन्थ्यो भने, धार्मिक नेताहरूले राम्ररी जानेका सबै धर्मशास्त्रहरूले प्रभु येशूकै गवाही दिँदै थिए अनि पुरानो करार जानेका कारण जुन अनन्त जीवन उनीहरूका विचारमा उनीहरूले प्राप्त गरेका थिए, स्वयं प्रभु येशूका रूपमा त्यो उनीहरूका सामु प्रत्यक्ष थियो, जसका विषयमा सबै धर्मशास्त्रहरूले कुरा गरेका थिए । (यूहन्ना ५ः३९, ४०, ४६, ४७) ।
येशू र पिता एक हुनुहुन्छ
येशूले भन्नु भयो, उहाँ र पिता एक हुनुहुन्छ । “फिलिपले उहाँलाई भने, हे प्रभु, हाम्रीलाई पिता देखाइदिनुहोस् । त्यति भए हामीलाई पुग्छ । येशूले तिनलाई भन्नु भयो, यति समयसम्म म तिमीहरूसँग छु, तैपनि तिमीहरूले मलाई चिन्दैनौ? जसले मलाई देखेको छ, त्यसले पितालाई देखेको छ । तिमी कसरी भन्न सक्छौ, हामीलाई पिता देखाइदिनुहोस्?” यूहन्ना १४ः८—९, १७ः११ र २१—२३, १०ः३० । पुत्र पिता जस्तै हुनुहुन्छ; कुनै पुत्रको पिता एक सच्चा परमेश्वर हुनुहुन्छ भने त्यो पुत्र पनि त्यही एक सच्चा परमेश्वर नहुने कुरा असम्भव छ, किनभने उहाँहरू एक हुनुहुन्छ
(१ यूहन्ना २ः२२, २३) । पुत्रलाई पिताबाट र पितालाई पुत्रबाट अलग गर्ने कार्यको कुनै सम्भावना नै छैन । परमेश्वरमा वास्तवमा विश्वास गर्नु भनेको परमेश्वरको रूपमा प्रभु येशूमा विश्वास गरिनु हो, किनभने उहाँ अनन्तकालमा परमेश्वरसँग रहेका शब्द हुनुहुन्थ्यो र उहाँ स्वयं परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो । “आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो, अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो । उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो । सबै थोक उहाँद्वारा बनिए, र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँबिना बनिएन ।” यूहन्ना १ः१—३ ।
येशूले स्वयंलाई राम्रो मानिसभन्दा अधिक ठाने अनि आफूलाई संसारका सृष्टिकर्ता, परमेश्वर माने, जसले मासु र रगत धारण गरे र हाम्रा उद्धारकर्ता भए । यस प्रकार स्वयं आफ्नो बलिदानद्वारा उहाँले पापको नाश गर्नु भयो (हिब्रू ९ः२६) । भाइ स्टीफन हाग्रेर्व
के प्रभु येशू बाँडिनु भएको छ?